Ukukhiqizwa Okuhle Kwezimboni Nezimboni ezihamba phambili | UJesson Flag Ubuciko Nemisebenzi
Hehe ukunakwa okuningi ngamafulegi wokukhangisa angled ngokwezifiso
Yenza amakhanda aphenduke futhi abantu bathutheleke beze ebhizinisini lakho noma umcimbi ngamafulegi wokukhangisa asesitayeleni nakhangayo. Lawa mafulegi wokukhangisa angakhanyi kodwa ahlala isikhathi eside enziwe ngokwezifiso zelogo yakho, isikhangiso, noma imicimbi yomcimbi ephrintiwe endwangweni emise okwezinyembezi. Lo mklamo oyingqayizivele uvumela ukumaketha kwakho nezithombe zakho zokukhangisa zigqame kwamanye amafulegi wokukhangisa wendabuko, okukuvumela ukuthi ukhange ukunakwa okuningi futhi uthole izinzuzo eziningi zokuphromotha.
Phrinta Umbono Wakho Kuzindwangu Ezihlala Njalo
Njengomhlinzeki wemikhiqizo ephrintiwe yangokwezifiso, sinikela ngamasevisi akhethiwe, kusuka kubuciko, osayizi bomkhiqizo kuya ezindwangu. Ngokunikeza ukukhethwa okubanzi kwezindwangu, sikuvumela ukuthi uthole izindwangu ezifanele kakhulu ngokwesabelomali sakho nezimfuno zakho.
Amafulegi wokukhangisa wekhwalithi alungele noma imiphi imicimbi yokuphromotha
Idizayini eyingqayizivele yamafulege ophaphe ikwenza kube okulungele cishe yonke imicimbi noma imicimbi yokuphromotha. Amafulegi wokukhangisa aprintwe ngokwezifiso atholakala ngosayizi abathathu abahlukene anezisekelo zokugoqa ezibanzi ukuze amafulegi wokukhangisa akwazi ukuzimela ngaphakathi ezindlini. Zitholakala futhi ngesigxobo somhlabathi lapho zibekwe ngaphandle njengezinto eziqinile, okuzivumela ukuthi zimelane nesimo sezulu esibi njengomoya nemvula. Lawa mafulegi wokukhangisa wezimpaphe ayaphatheka futhi kulula ukuwamisa njengoba angakhiwa ngemizuzu.
Izimpaphe Zezinhlobonhlobo Zezinhlobonhlobo Zamasayizi Ahlukahlukene Wokubonisa
Izinhlobo zethu ezijwayelekile nezentengiselwano zehlukile ezintweni ezibekiwe ngepali. Ngohlobo olujwayelekile, isigxobo senziwe nge-aluminium ngenkathi i-deluxe iyi-fiberglass. Futhi sinikeza amafulegi wokwenza izimpaphe osayizi abahlukahlukene ukuze ahambisane nezidingo zakho.